Sebenzisa ngokugcwele umatilasi onzima entwasahlobo ukuthuthukisa ibhizinisi lakho | Rayson
Sebenzisa ngokugcwele umatilasi onzima entwasahlobo ukuthuthukisa ibhizinisi lakho
Ungaxhuma kuze kube yi-3 USB yangaphandle yangaphandle ku-Himedia Q5. Nganoma yiliphi amachweba ama-3 ase-USB, kanye ne-SATA DRIVE ngesixhumi se-SATA esinamathiselwe. Iphakheji iqukethe amakhekhe we-SATA, okuwukuhamba ngamabomu njengoba kungenzeka ukuthi ungaba nentambo ye-Stare Sata ngokuqhathaniswa nekhebula le-USB.
Njengoba ngikhula, ngifunde ukuthi ibhange lemishini yasendulo yakudala ithengise amakhulu amadola.kodwa, intengo yebhange lomshini wamakhophi ingama- $ 25 kuya ku- $ 50.Iminyaka edlule ngithengile Njengoba kuthakazelisa ama-antis.isn I-Cast Iron MichchAns Bank yi-bazabout yokuqala engu-1875 yazo yenziwa, ethandwa kakhulu yinja ye-stunt.
Kuthiwani ngezibuyekezo zangempela zenqubekela phambili yokwakha yangempela - lezi zinhlaka zefenisha zincane. Isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba inhloko yemzukulu yesikhathi esizayo ibambeke phakathi kukaCharles P \_ "Stick Stick Solid P \_" ROGERS Bed? I-recliner ayibukeki kahle ngokulengiswa nokubuka i-TV. Ngiyethemba amasu a & p ukubeka imicamelo emikhulu enkulu kukho ukuze uyitheshe.